Sarkaal ka tirsanaa Maamulka Puntland oo lagu dilay Waqooyiga Gaalkacyo – AfmoNews
Sarkaal ka tirsanaa Maamulka Puntland oo lagu dilay Waqooyiga Gaalkacyo
Rag hubeysan ayaa waxaa la sheegay in xalay Xaafad ka tirsan waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ku dileen Sarkaal ka tirsanaa Dowladda Hoose ee Magaaladaas qaybta Maamulka Goboleedka Puntland.
Sarkaalka la dilay oo Magaciisa lagu soo koobay (Madax wargalay) ayaa waxaa goobjoogayaal sheegeen in xilliga la dilayay uu ku sugnaa Xaafada Garsoor ee Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug.
Ragga ka dambeeyay dilka Sarkaalka ayaa goobta ka baxsaday, waxaana meydka halkaasi ka qaaday ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Puntland, iyaga oo sidoo kale halkaasi xalay ilaa saaka howlgallo kala duwan ka wada.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada dilkaas, iyaga oo sheegay in uu kamid ahaa Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Mudug ee Dowlad goboleedka Puntland, Hayeeshee aysan bixin faah faahino kale.
Laamaha Ammaanka Maamulka Puntland weli wax faah faahin ah kama bixin dilka mas’uulka ka tirsanaa Maamulka Gobolka Mudug loogu geystay Magaalada Gaalkacyo, iyada oo dilal kala duwan horay uga dhaceen Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo.